Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Teknolojia fitsangatsanganana • Travel Wire News
Star Alliance hanitatra ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ireo kaompaniam-pitaterana mpikambana
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Star Alliance hanitatra ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ireo kaompaniam-pitaterana mpikambana
Ny fifanarahana nambara androany dia mikendry ny hanafainganana ny fisian'ny touchpoint momba ny serivisy biometrika manerana ny seranam-piaramanidina mpikambana ao amin'ny Star Alliance raha manome traikefa amin'ny seranam-piaramanidina haingana kokoa.
Star Alliance, NEC Corporation ary SITA nanao fifanarahana nifanaovana.
Ny sehatra biometrika Star Alliance dia afaka mampiasa fotodrafitrasa seranam-piaramanidina iraisan'ny SITA efa misy amin'ny seranam-piaramanidina 460 mahery.
Ireo mpandeha mampiasa ny sehatra biometrika Star Alliance dia hisoratra anarana indray mandeha ihany.
Ireo mpanjifa fandaharana matetika an'ny flyer an'ny sidina mpikambana ao amin'ny Star Alliance dia tsy ho ela dia afaka mampiasa ny mombamomba azy ireo amin'ny zotram-piaramanidina mpandray anjara rehetra amin'ny seranam-piaramanidina mandray anjara aorian'ny fifanarahana vaovao eo amin'ny fifanatonana lehibe indrindra eran-tany, NEC Corporation ary Sita.
Ny fifanarahana nambara androany dia mikendry ny hanafainganana ny fisian'ny touchpoint momba ny asa fanompoana biometrika Star Allianceseranam-piaramanidina mpikambana ao aminy raha manome traikefa amin'ny seranam-piaramanidina haingana kokoa.
Mifandray amin'ny vahaolana Smart Path an'ny SITA, ny sehatra biometrika Star Alliance dia afaka mampiasa fotodrafitrasa seranam-piaramanidina iraisana SITA efa misy amin'ny seranam-piaramanidina 460 mahery. Miaraka amin'ny fanatrehan'ny SITA sy ny NEC manerantany, tetikasa biometrika marobe dia azo alefa mifanindry, hanafainganana ny fisian'ny fikarakarana mpandeha biometrika amin'ireo zotram-piaramanidina Star Alliance manerantany. Hanan-danja izany amin'ny famelana ny Star Alliance hametraka haingana kokoa ny biometrika.
Tombony bebe kokoa ny sehatra NEC I: Delight - izay ahafahan'ny mpandeha nisafidy ny hampiasa ny serivisy ho fantatra haingana ary manana marim-pahaizana marim-pototra, eny fa na dia mihetsika aza - dia azo ampidirina miaraka amin'ny SITA Smart Path. Ny sehatra I: Delight koa dia afaka mamantatra ireo mpandeha na dia manao sarontava aza, endrika iray manan-danja kokoa amin'ny dia mandritra ny areti-mandringana ankehitriny. Ny sehatra dia efa ampiasain'ny seranam-piaramanidina mpikambana ao amin'ny Star Alliance amin'ny seranam-piaramanidina maro any Eropa.
Ny mampiavaka azy, ny mpandeha mampiasa ny sehatra biometrika Star Alliance dia misoratra indray mandeha ihany. Avy eo ny mpandeha dia afaka mamakivaky ireo toerana misy alalana biometrika hamakivaky ireo seranam-piaramanidina mpikambana marobe sy seranam-piaramanidina mandray anjara amin'ny alàlan'ny endrik'izy ireo fotsiny. Manafaingana ny lalana mamakivaky ny seranam-piara-manidina ity ary mahavita tsy misy nikitika mihitsy ny dingana tsirairay, manohana ny fepetra fiarovana amin'ny fahasalamana sy fahadiovana manan-danja amin'ny fotoanan'ny COVID-19 ary manome ny fahitan'ny Star Alliance ny traikefa mpanjifa tsy misy tohika.
Jeffrey Goh, CEO, Star Alliance, dia nilaza fa: "Ity fifanarahana ity dia fitaovana lehibe amin'ny fitondrana ambaratonga bebe kokoa amin'ny serivisy biometrika antsika, miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fihaonana amin'ny andrasan'ny mpanjifa ho an'ny traikefa tsy misy tohiny sy ara-pahadiovana kokoa manerana an'ireo orinasam-piaramanidina mpikambana ato amintsika. Ny biometrika dia singa iray manan-danja amin'io traikefa io sy ny paikadinay hitarika amin'ny alàlan'ny fanaovana nomerika ny dian'ny mpandeha. ”
Barbara Dalibard, CEO, SITA, dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ny NEC, SITA dia faly manohana ny Star Alliance amin'ny fitondrana ny tombony feno amin'ny mombamomba ny biometrika amin'ireo kaompaniam-pitaterana mpikambana ao aminy. Ny mpandeha dia nandray tsara ny tombony azo amin'ny fifehezana ary mitondra fiara mandeha amin'ny diany ho an'ny mpandeha; fironana izay nohamafisin'ny COVID-19. Miaraka amin'ity fifanarahana ity dia hitatra ny tombotsoan'ny mombamomba ny biometrika amin'ny zotram-piaramanidina tokana na amin'ny dia mankany amin'ny tambajotram-pitaterana seranam-piaramanidina marobe. Tena tsy manam-paharoa izany ary mampiseho ny tombony azo avy amin'ny nomerika amin'ny mpandeha. ”
Masakazu Yamashina, filoha lefitra mpanatanteraky ny NEC Corporation dia nilaza fa: "NEC dia manan-kaja hiditra amin'ity fiaraha-miasa amin'ny antoko telo miaraka amin'ny Star Alliance sy SITA ity. Na dia mitohy aza ny fiantraikan'ny COVID-19, dia faly izahay mitarika ny famoronana fitsangatsanganana tsy misy tohika sy tsy misy tohika. Ny NEC dia manolo-tena hanome traikefa ho an'ny mpanjifa azo antoka sy mahazo aina amin'ny alàlan'ny vahaolana NEC I: Delight management identity. ”